Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Hansi-Dieter Flick Storymụaka Akụkọ Ihe Mere Eziokwu Akụkọ Ndụ
Ihe omuma anyi nke Hansi-Dieter Flick na-egosiputa Eziokwu banyere Akụkọ nwata ya, Nko mbido ya, ezi na ulo ya, ndi nne na nna, nwunye ya, ibi ndu ya, uru ya na ndu onwe onye.
N'okwu ndị dị mfe, nke a bụ akụkọ banyere njem ndụ ndị njikwa, site na mgbe ọ bụ nwata, ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ndụ gị sie ike, lelee oge ọ bụ nwata gaa na nnukwu ụlọ ngosi - nchịkọta zuru oke nke Hansi-Dieter Flick's Bio.
Mmalite Ndụ na Ebili nke Hans-Dieter Flick.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye na-agba egwu, onye na-emeri treble. Agbanyeghị, ọ bụghị ọtụtụ gụrụ akụkọ ndụ Hansi Flick nke na-ekpughe. Enweghi ike ịmalite ịmalite ndụ nwata ya na ezinụlọ ya.
Akụkọ Hans-Dieter Flick Childhood:
Maka ndị na-ebido ebido, ọ na-akpọkarị ya Nchịkwa-Na-emeri. Hans-Dieter Flick mụrụ na 24th ụbọchị nke February 1965 na nne ya, Traudel Flick na nna, Hans Flick na obere obodo Heidelberg, ndịda ọdịda anyanwụ Germany.
Hans-Dieter Flick na-eto eto Afọ:
Onye njikwa German toro na Mückenloch nke bụ agbata obi na obodo Neckargemünd, Germany. Agbataobi a bụ ama ama maka egwu egwu na ịgba bọọlụ. Mgbe ọ na-agwa blog ezinụlọ German okwu; “Mee Ka Childrenmụaka Dị Ike, ”Manịja kwuru otu oge;
“Esi m n’obodo ebe m ghọrọ onye òtù egwuregwu bọl ma ọ bụ òtù egwú.
Nhọrọ ndị m nwere mere ka ọ dịrị m mfe ikpebi iso n’òtù egwuregwu bọl. ”
Ezigbo Ezinụlọ nke Hans-Dieter:
Enwere ọtụtụ okwu dị mma nke nwere ike ịkọwa oge nwata nwata German belụsọ “enweghị”. Ndị nne na nna Hans-Dieter Flick bụ ụmụ amaala klas ma tolite nwa ha nwoke na ezigbo ebe dị na Neckargemünd. Ha kwadoro ya ka ọ họrọ igwu bọọlụ wee hụ na ọ nwere mmalite dị mma na ya.
Ezigbo ezinụlọ nke Hans-Dieter Flick:
Ọ bụ ihe ọmụma zuru oke na onye njikwa ahụ bụ onye mba Bonafide German. Nsonaazụ nyocha emere iji chọpụta agbụrụ Flick na-egosi na ọ bụ agbụrụ Pfaelzisch. Enwere ike ịchọta agbụrụ ahụ na obodo amụrụ ya, bụ Heidelberg.
Ezinụlọ Hans-Dieter Flick sitere na agbụrụ German Pfaelzisch.
Ihe omume Hans-Dieter Flick na Nlekọta Nlekọta Ọrụ:
Na-ekwu maka mmalite dị nro, nwata ahụ bụ naanị 5 afọ mgbe ọ malitere igwu egwu maka mpaghara BSC Mückenloch. Ọ nwere ọganihu igwu egwu maka SpVgg Neckargemünd site na 1976 ruo 1981 na mgbe e mesịrị, SV Sandhausen 1981-1983.
N'elu ọrụ ya na SV Sandhausen, Flick hụrụ ma weta ya na klọb site na Bayern Munich mgbe ọ dị afọ 20. Oge ise ya na ha nọrọ hụrụ ya ka o meriri aha Bundesliga anọ na iko 1986 DFB.
Oge egwu Hans-Dieter Flick. Nke a bụ foto a na - adịghị ahụkebe nke onye na-emebu egwuregwu na-egwu Bayern Munich.
Akụkọ Hans-Dieter Flick Fighter - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe onye ọkpọ egwuregwu ahụ nwere mmerụ ahụ na-eyi egwu na klọb ya na - esote, FC Köln, ọ maara na oge eruola ka ọ laa ezumike nká. Na 28, ọ kwụsịrị ịkụ bọl ọkachamara mana ọ nọrọ oge ụfọdụ na-apụta maka otu onye na-amu amu otu egwuregwu Victoria Bammental.
N'oge na-adịghị anya, ịpụ ụkwụ abanye n'ọzụzụ wee malite ijikwa Bammental. Onye German ahụ nọrọ ọtụtụ oge ha na onye njikwa tupu a họpụta ya dị ka onye isi nchịkwa Hoffenheim na 2000. O nyeere ha aka ị nweta nkwalite na ngalaba nke atọ ma debe ha n'ụzọ ziri ezi maka onye ga-anọchi ya Ralf Rangnick iji hụ na ọganihu ha na Bundesliga 2 na 2007.
Akụkọ Hans-Dieter Flick Flick - Rise To Fame Story:
N'oge ọ nọ n'ọkwa ọchịchị, Flick nwere ezigbo ọzụzụ ịnye Red Bull Salzburg tupu ọ ghọrọ onye nchịkwa nchịkwa nke Germany na 2006. Ya na onye isi ya rụkọrọ ọrụ. Joachim dị ala duru ndi otu ochichi nke ndi German ka ha rute elu nke football zuru ụwa ọnụ.
Ihe ịga nke ọma mbụ ha gụnyere ịgụnye ebe nke abụọ na UEFA Euro 2008 yana ị nweta ọnọdụ nke atọ na iko ụwa nke 2010 FIFA. Germany meriri iko ụwa ọzọ na-esote n'okpuru njikwa ha, mmepe nke mere ka ọ dịrị Flick mfe ọrụ ya ọzọ dị ka onye isi egwuregwu na German Football Association.
Laa azụ n'oge ahụ na 2014, onlywa na-echeta Joachim Löw, ọ bụghị Hans-Dieter Flick- onye osote onye njikwa iko ụwa.
Ọ na-arụkwa ọrụ dị ka onye ntụzi egwuregwu na Hoffenheim tupu ọ laghachite na Bayern Munich dị ka onye enyemaka onye na-enyere ha aka na 2019. Mgbe onye isi nchịkwa Niko Kovac hapụrụ ndị Reds na nkwenye kwekọrịtara na Nọvemba 2019, Flick ghọrọ onye njikwa oge na-eduga ndị Reds site na ọnọdụ nke anọ ịghọ ndi meriri n’aru Bundesliga n’otu asato ha.
N'oge na-adịghị anya, ọ duru ndị otu iji merie DFB Pokal na July na ọgụ nke PSG Thomas Tuchel iji nweta mmeri nke 2019/2020 Champions League na August 2020. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Banyere nwunye na Hans-Dieter Flick Fighter:
Onye German alụọla di na nwunye kemgbe ihe karịrị afọ 30. Nwunye Hansi Flick abụghị onye ọzọ ma ọ bụ Silke. Ha zutere mgbe ha dị afọ iri na ụma wee gaa n'ihu na-abụ di na nwunye na agbamakwụkwọ e mere na Bammental.
Zute nwunye Hans-Dieter Flick, Silke Flick.
N'ịchọ ịbụ otu n'ime ogidi nkwado ya, nwunye Hansi Flick bụ nne nye ụmụ ya nwanyị abụọ, Kathrin na Hannah. Childrenmụaka abụọ ahụ etoola. N'ezie, Hana (nwa nwanyị nke nta) abụworị nne nwere ụmụ erughị 2.
Ndụ Ezinụlọ Hans-Dieter Flick:
Ezinụlọ nwere ike ịbụ ihe niile anyị chọrọ ka ha bụrụ. Hụnanya na nkwado ha na-enye dị ịtụnanya. Anyị na-ewetara gị akụkọ gbasara nne na nna Hans-Dieter Flick, ụmụnne ya na ndị ikwu ya.
Banyere nne na nna Hans-Dieter Flick:
Papa manịja ahụ kpọrọ Hans. Ọ bụ ezigbo nna na-akwado nkwado nke gosipụtara mmasị dị ukwuu na ọrụ nlekọta nwa ya. Ọ fọrọ nke nta ka ọ dị ka ọ ga-adị Flick ka ọ ga-ada na mmeri ma ọ bụ mmeri. Nne Flick nwekwara mmasị ya kachasị mma ma soro di ya na-arụ ọrụ iji nye nwa ha ezigbo nlekọta nke nne na nna.
E gosipụtara ụdị ịhụnanya na nkwado ahụ n'ụdị ya kachasị mma mgbe nne na nna Hansi Flick rụkọrọ ọrụ na ndị bi na Bammental (ebe onye njikwa bi n'oge ahụ) iji nye nwa ha ezigbo nnabata mgbe mmeri ụwa 2014 meriri ya.
Banyere ụmụnne Hans-Dieter Flick ':
Anyị achọtabeghị ndekọ nke ụmụnne njikwa. N'ihi nke a, enwere ike ịbụ na onye njikwa ahụ bụ naanị nne na nna ya ruo mgbe ọ nyere nghọta ọ bụla nke na-egosi ịdị adị nke nwanne nwoke ma ọ bụ nwanne ya nwanyị.
Banyere ndị ikwu Hans-Dieter Flick:
Anyị ka ga-enweta ozi gbasara ezinụlọ ezinụlọ onye njikwa ahụ ọkachasị dịka o metụtara nne na nna ya na nne na nna ya. N'otu aka ahụ, nwanne nna nna ya, nwanne nne ya na nwanne nne ya amabeghị ebe nwanne nwanne ya na nwanne ya amatabeghị.
Ndụ nke Onwe Onye Hans-Dieter:
Onye njikwa anyị maara abụghị ihe niile gbasara bọọlụ. Ọ na - ewepụta oge dị mma maka ndị enyi na ezinụlọ ma nwee mmekọrịta dị mma na ndị egwuregwu na ndị ọzọ na - enye ọzụzụ na mpụga bọọlụ.
Àgwà doro anya nke na-akọwapụta ụdị Flick bụ ịdị umeala n'obi ya na enweghị mmasị maka esemokwu na asịrị. Ọ hụrụ njem n'anya, ịmụ ihe ọhụrụ, ikiri ihe nkiri n'etiti ọdịmma na ntụrụndụ ndị ọzọ.
Hans-Dieter Flick Net Net Worth na Ndụ Style:
Ka anyị kwuo maka ọnụọgụ nchịkwa nke 2020 na ihe ọ na-eme iji nweta ego ya. Flick nwere atụmatụ ruru $ 1 nde. Isi mmalite nke akụ na ụba ya bụ ụgwọ na ụgwọ ọ na-akwụ ụgwọ dị ka njikwa.
O nwekwara nkwenye nke azụmaahịa na-emeri na-enye ego. Yabụ, ego Flick nwetara n'aka ego n'ihe niile. Carsgbọ ala ọkụ na ụlọ dị oke ọnụ adịghị na ndepụta nchegbu ya. Ọ na-ele anya na ọ dị mkpa na azụmahịa nke ịnye ọzụzọ.
Hansi-Dieter kpatụ aka gaa Eziokwu:
Lelee eziokwu banyere onye nchịkwa ahụ kpọmkwem iji nyere gị aka ịchọta ya n'ụzọ zuru ezu.
Eziokwu # 1 - Banyere Onye Ọzụzụ Banyere Banyere Banyere:
Ndị na-eto eto bụ ndị na-amụ ọrụ ụlọ akụ. Ọ malitere ọzụzụ maka ọrụ ahụ dị ka ndabere ọ nwere ike ịlaghachi ma ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ịga nke ọma na bọl. Ọ raara onwe ya nye nke ukwuu na ọzụzụ ya na ọ jụrụ onyinye maka igwu egwu maka VFB Stuttgart bụ onye mechara merie aha 1983/84 Bundesliga.
N'adịghị ka ihe ị kwenyere, Hansi esoghị na aha onye nchịkwa ahụ. Ọ bụ utu aha n'ihi na ọ chọghị ka akpọ ya Hans-Dieter. N'ihi ya, ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ ji aha ya bụ Hansi mara ya.
Eziokwu # 3 - Sholọ ahịa:
Flick nwere ụlọ ahịa egwuregwu na Bammental ebe ọ na-asọpụrụ nwa amaala na-asọpụrụ nke ọdụdụ na 2015. Ndị na-eto eto bi n'obodo ahụ toro na ụlọ ahịa ahụ maara. Otú ọ dị, onye nchịkwa ahụ mechiri ya n'ihi na ya na ezinụlọ ya nwere ihe ndị ka mkpa ha kwesịrị ịga.
Aha n'uju Hans-Dieter "Hansi" kpatụ aka gaa
aha otutu Hansi
Ụbọchị ọmụmụ February 24th 1965
Ebe amụrụ onye Obodo nke Heidelberg na West Germany
Ndị nne na nna Traudel (nne) na Hans (nna).
Children Kathrin na Hana
omume ntụrụndụ Ingga njem, ile ihe nkiri na ịmụ ihe ọhụrụ
Ngwakọta Net $1
Daalụ maka ịgụ akụkọ ihe mere eme nke Flick- onye nchịkwa Bayern Munich, onye na-emeri treble treble. Akụkọ Hans-Dieter Flick na-akpali anyị ịkwadebe maka ohere ma bulie ha elu mgbe ha rutere. Onye njikwa German mere nke ahụ n'ezie site na iji ahụmịhe 2014 FIFA World Cup na ịkwụsi ike ike ya merie 2019/2020 Champions League.
Na Lifebogger, izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ bụ ụkpụrụ nduzi anyị n'ịmefe ihe ncheta gbasara ndị njikwa kachasị amasị gị. You hụrụ ihe ọ bụla na-adịghị ele anya na akụkọ ndụ Hans-Dieter Flick? Mee ka anyị mata banyere ya na ngalaba nkọwa ma ọ bụ gwa anyị ihe ị chere banyere ya.
Ifiedbọchị agbanwee: November 4, 2020